Buugani wuxuu bilawday 2005-tii hoose ee Jaamacadda Columbia. Waqtigaan, waxaan ahaa arday qalinjabiyey, waxaanan ku jiray tijaabo internetka ah oo ugu dambeyntii noqon lahaa nuqulkayga. Waxaan kuu sheegi doonaa dhammaan qaybaha sayniska ee tijaabadan ee cutubka 4, laakiin hadda waxaan rabaa inaan kuu sheego wax aanan ku jirin falsafadeyda ama waraaqadayda. Waa wax aad u baddelay sida aan uga fikiro cilmi baarista. Mid ka mid ah subaxdii, markii aan imid xafiiska gurigayga, waxaan ogaanay in habeenkii 100 qof oo ka yimid Brazil ay ka qaybgaleen tijaabadeyda. Khibradahaan sahlan ayaa saameyn weyn igu yeeshay. Waqtigaas, waxaan haystaa saaxiibo lahaa daraasad tijaabo ah oo tijaabo ah, waxaanan ogaa sida ay u shaqeynayeen si ay u shaqaaleeyaan, kormeeraan, una bixiyaan dadka inay ka qayb qaataan tijaabooyinkaas; haddii ay 10 qof ku socon karaan hal maalin, taasi waxay ahayd horumar wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, tijaabadayda internetka, 100 qof ayaa ka qayb qaatay markii aan seexanayay . Samaynta cilmi-baaristaada intaad huruddo ayaa laga yaabaa inay u muuqato mid aad u fiican oo run ah, laakiin ma aha. Isbedelka tiknoolijiyadda-gaar ahaan isbedelka da'da analogga illaa da'da dijitalka ah - macnaheedu waa inaan hadda soo uruurin karnaa xogta bulshada siyaabo cusub. Buugani wuxuu ku saabsan yahay cilmi-baaris bulsheed hababkan cusub.
Buugan waxaa loogu talagalay saynisyahanno bulsheed oo raba in ay sameeyaan sayniska xog dheeri ah, saynisyahanno cilmiyaysan oo raba in ay sameeyaan sayniska bulshada oo badan, iyo cid kasta oo daneyneysa geedka labada goobood. Marka la eego cidda buuggan loogu talagalay, waa inay tagaan iyagoo aan sheegin in uunan ahayn ardayda iyo macalimiinta. In kastoo, waxaan hadda ka shaqeynayaa jaamacad (Princeton), waxaan sidoo kale ka shaqeeyay dawladda (Xafiiska Tirakoobka Maraykanka) iyo warshadaha sayniska (ee Microsoft Research) sidaa daraadeed waxaan ogahay in ay jirto baadhitaano xiiso leh oo ka dhacaya meel ka baxsan jaamacadaha. Haddii aad ka fekereyso waxaad samaynayso cilmi bulsheed, markaa buugani waa adiga, iyada oo aan loo eegin meesha aad shaqeysid ama farsamooyinka nooca aad hadda isticmaashid.
Sidii aad hore u ogaan laheyd, buugga buuggani wuu ka duwan yahay kuwa kale ee buugaagta tacliinta. Taasi waa ujeeddo. Buugani wuxuu ka soo baxay seminaaro qalinjebin ah oo ku saabsan sayniska bulshada ee aan baray Princeton ee Waaxda Sociology tan iyo 2007, waxaanan jeclaan lahaa in aan qabsado qaar ka mid ah tamarta iyo xiisaha ay ka qabaan seminaarkaas. Gaar ahaan, waxaan rabaa in buuggan uu haysto saddex sifooyin: Waxaan rabaa in ay noqoto mid caawimaad leh, mustaqbalka ujeedada leh, iyo rajo wanaagsan.
Caawin : Hadafkeygu waa inaan qoro buug kuu caawiya. Sidaa darteed, waxaan doonayaa inaan ku qoro qaab furan, aan rasmi ahayn, iyo habdhaqameedka. Taasi waa sababtoo ah waxa ugu muhiimsan ee aan doonayo in la gudbiyo waa hab gaar ah oo looga fikiro cilmi baarista bulshada. Iyo, waayo-aragnimadayda waxay soo jeedinaysaa in habka ugu wanaagsan ee lagu gudbin karo habkan fekerku yahay mid aan rasmi ahayn iyo tusaalooyin badan. Sidoo kale, dhammaadka cutub kasta, waxaan haystaa qayb la yiraahdo "Maxaa laga akhrisan karo" oo kaa caawin doona inaad ku wareejiso akhris faahfaahsan iyo farsamo badan oo ku saabsan mawduucyada aan soo bandhigayo. Ugu dambeyntii, waxaan rajeynayaa in buugani uu kaa caawin doono labadiinaba cilmi baaris iyo qiimeyn daraasadda dadka kale.
Maareynta mustaqbalka : Buugani wuxuu kaa caawin doonaa inaad sameyso cilmi-baaris bulsho adoo adeegsanaya nidaamyada dhijitaalka ah ee maanta jira iyo kuwa mustaqbalka la abuurayo. Waxaan bilaabay samaynta cilmi baadhistan noocaas ah 2004, tan iyo markaasna waxaan arkay isbeddelo badan, waxaanan hubaa in ka badan maadada shaqadaada waxaad arki doontaa isbedelo badan. Trick The in ay sii joogi khuseeya ee wejiga isbedelka waa sidaynu. Tusaale ahaan, tani maaha inuu noqdo buug ku baraya sida dhabta ah sida loo isticmaalo API API sida uu maanta u jiro; Taa beddelkeeda, waxay ku socotaa inaad barato sida loo barto ilaha xogta waaweyn (cutubka 2). Tani maaha inay noqoto buug ku siinaya tilmaamo tallaabo tallaabo ah oo loogu talagalay tijaabinta tijaabada ah ee Amazon Mechanical Turk; Taa baddalkeeda, wuxuu ku barayaa sida loo qaabeeyo loona turjumo tijaabooyinka ku tiirsan kaabayaasha da'da ah (cutubka 4). Iyada oo la adeegsanayo is-qoris, waxaan rajeynayaa in tani ay noqon doonto buug aan waqtigeeda laheyn oo mawduuc ku salaysan.
Rajo: The labada beelood in buuggan uu ku lug-bulshada saynisyahano iyo xogta saynisyahano-leeyihiin jeeda iyo danaha aad u kala duwan. Marka lagu daro kala duwanaanshaha sayniska la xiriira, oo aan ka hadlayo buugga, waxaan sidoo kale ogaaday in labadan bulshadood ay leeyihiin qaabab kala duwan. Aqoonyahanka cilmiga ah ayaa guud ahaan ku faraxsan; waxay u muuqdaan inay arkeen galaaska badhkeed buuxa. Aqoonyahanada bulshada, dhanka kale, guud ahaan waa kuwo aad u muhiim ah; waxay u muuqdaan inay arki karaan dhalada sida nuskii madhan. Buugan, waxaan rabaa in aan kobciyo codka wanaagsan ee aqoonyahanka xogta. Marka, marka aan soo bandhigo tusaalayaal, waxaan kuu sheegi doonaa waxa aan jeclahay tusaalahan. Iyo, marka aan wax ka sheego dhibaatooyinka tusaalooyinka - oo waan samayn doonaa taas sababta oo ah cilmi baaris aan fiicnayn - waxaan isku dayi doonaa inaan tilmaamo dhibaatooyinkan si habboon oo wax ku ool ah. Ma doonayo inaan noqdo mid muhiim u ah in ay noqoto mid muhiim ah - Anigu waxaan noqonayaa mid muhiim ah si aan kuu caawiyo sameynta cilmi baaris fiican.
Waxaan weli ku jirnaa maalmaha hore ee cilmi baarista bulshada ee da'da digital, laakiin waxaan arkay aragtiyo is khilaafsan kuwaas oo ah mid aad u caadi ah in ay macno ii leedahay inaan ka hadlo halkan, ee ku jirta hordhaca. Laga soo bilaabo saynisyahannada xogta, waxaan arkay laba ismaandhaaf oo caadi ah. Marka hore waxay ku fekerayaan in xog badan ay si toos ah u xalliyaan dhibaatooyinka. Si kastaba ha ahaatee, cilmibaarista bulshada, taasi ma ahan waayo-aragnimadayda. Xaqiiqdii, cilmi baaris bulsheed, xog fiican - sida laga soo xigtay macluumaad badan - waxay u muuqdaan inay caawinaad badan yihiin. Fahamka labaad ee aan ka arko saynisyahannada xogta waxay u maleynayaan in sayniska bulshadu yahay kaliya farabadan oo ah hadal fara badan oo lagu duubay dareen caadi ah. Dabcan, sida sayniska bulshada-si gaar ah sida cilmi-nafsi-ma aanan ku raacsaneyn taas. Dadku waxay si adag u shaqeynayeen si ay u fahmaan dabeecadda aadanaha muddo dheer, waxayna u muuqataa in ay iska indha tirto xigmadda ka soo baxday dadaalkan. Rajadaydu waa in buuggani uu ku siin doono qaar ka mid ah xigmaddaas si hab fudud loo fahmo.
Laga soo bilaabo saynisyahanno bulsheed, waxaan sidoo kale arkay laba ismaandhaaf oo caadi ah. Ugu horreyntii, waxaan arkay qaar ka mid ah dadka qora fikradda guud ee cilmi baarista bulshada iyadoo la adeegsanayo qalabka da'da dijitaalka sababtoo ah dhowr waraaqo xun. Haddii aad akhriso buuggan, waxaad horay u akhrisatay farqiga waraaqaha isticmaala xogta warbaahinta bulshada sida siyaabaha loo isticmaalo (ama labadaba). Sidoo kale waxaan leeyahay. Si kastaba ha noqotee, waxay noqon kartaa qalad halis ah oo lagu soo afjaro tusaalooyinkan oo ah in dhammaan cilmi-baarista bulsheed ee digital-ka ah ay xun yihiin. Xaqiiqdii, waxaa dhici karta inaad sidoo kale akhrido farabadan oo waraaqaha isticmaala xogta siyaabaha ah ee ufilan ama qaldan, laakiin ma qori kartid dhammaan cilmi baarista adigoo isticmaalaya sahan. Sababtoo ah waxaad ogtahay in ay jirto baaritaan weyn oo la sameeyey xogta sahanka, iyo buuggan waxaan kuugu soo bandhigi doonaa in cilmi baaris weyn lagu sameeyo qalabka da'da digital.
Isbedelada labaad ee aan caadi ahayn ee aan arko saynisyahanno bulshadu waa in ay mustaqbalka ku wareeraan mustaqbalka. Markaan qiimeyno cilmi-baarista bulshada ee da'da-dijitalka-cilmi-baarista aan qeexayo-waxaa muhiim ah in aan waydiisanno laba su'aalood oo kala duwan: "Sidee buu ufilan yahay qaabkan shaqada cilmi-baarista hadda?" Iyo "Sidee baa u habboon cilmi-baaris mustaqbalka? "Cilmi-baadhayaashu waxay u tababaran yihiin inay ka jawaabaan su'aasha koowaad, laakiin buuggan waxaan qabaa in su'aasha labaad ay tahay mid muhiim ah. Taasi waa, inkasta oo cilmi-baarista bulshada ee da'da dijitalka aysan weli soo saarin mid aad u ballaaran, isbedelka isbedelka fikrada ah, heerka heerka horumarinta dijitaalka ah ayaa ah mid aad u deg deg ah. Waa isbeddelkani isbeddel-ka badan heerka hadda - taas oo ka dhigaysa cilmi-baaris digital-da ah oo xiiso leh aniga.
Inkasta oo cutubka ugu dambeeya uu u muuqan karo inuu kuugu deeqo hodantinnimo mustaqbal wakhti aan la cayimin mustaqbalka, hadafkeygu maaha inuu ku iibiyo nooc kasta oo cilmi baaris ah. Shakhsi ahaan shakhsiyan ma lahan sheybaar ahaan Twitter, Facebook, Google, Microsoft, Apple, ama shirkad kale oo tiknoolaji ah (inkastoo, si kastaba ha ahaatee, waa inaan sheegaa inaan ka shaqeeyey, ama aan ka helay maaliyad cilmi baaris, Microsoft, Google, iyo Facebook). Buuggan oo dhan, haddaba, hadafkaygu waa inaan ku hadlo sheeko macquul ah, oo kuu sheegaya dhamaan waxyaalaha cusub ee cajiibka ah ee suurtogalka ah, oo kugu hagaya qaar ka mid ah dabin yar oo aan arkay dadka kale oo dhaca (marmarna nafteyda u dhacay) .
Isgaadhsiinta sayniska bulshada iyo sayniska macluumaadka waxaa mararka qaarkood loogu yeeraa sayniska bulshada. Qaarkood waxay tixgeliyaan tan inay noqdaan farsamo, laakiin tani ma noqon doonto buug farsamo dareen dhaqameed. Tusaale ahaan, ma jiro isla'egyada qoraalka muhiimka ah. Waxaan doortay inaan qoro buugan sababta oo ah waxaan doonayay inaan arko aragtida guud ee cilmi baarista bulshada ee da'da digital, oo ay ku jiraan ilaha xogta, baaritaanada, tijaabooyinka, iskaashiga guud iyo anshaxa. Waxay u muuqatay mid aan suura-gal ahayn in la daboolo dhammaan mawduucyadaas oo ay bixiyaan tafaasiil farsamo oo ku saabsan mid kasta. Taa baddalkeeda, tilmaamayaasha qalab farsamo oo dheeraad ah ayaa lagu siiyaa qaybta "Maxaa akhrineysa" qaybta cutub kasta. Si kale haddii loo dhigo, buuggan looma qorshayn inuu ku baro sida loo sameeyo xisaabin gaar ah; halkii, waxaa loogu talagalay in la beddelo habka aad uga fekereyso cilmi baarista bulshada.
Sida loo isticmaalo buuggan kooraska
Sidaan horay u sheegay, buuggani wuxuu ka soo baxay seminaarka qalin-jabinta sayniska bulshada ee sayniska oo aan baray taniyo 2007-dii Princeton. Maadaama aad ka fekereyso isticmaalka buuggan si aad u barato koorso, waxaan u maleynayey in ay iga caawin karto inaan sharaxo sida ay u kordhay kooraskaygu iyo sida aan u malaynayo in loo isticmaalo koorsooyinka kale.
Muddo sanado ah, waxaan baray koorsada aan lahayn buug; Anigu waxaan ku wareejin doonaa maqaallo maqaal ah. Inkasta oo ay ardaydu awoodaan inay bartaan maqaalahan, qodobbada kali ma aysan keenin isbedelka fikradda ah ee aan rajeynayey inaan abuuro. Sidaa darteed waxaan ku qaadan lahaa inta badan waqtiga fasaxa siinta aragtida, macnaha, iyo talo si ay ardaydu u arkaan sawirka weyn. Buuggani waa isku dayga aan ku qoro dhammaan aragtidaas, aragti ahaan, iyo talooyin qaab aan lahayn shuruudo-ka mid ah sayniska bulshada ama sayniska xogta.
Koorsada semester-dheer, waxaan ku talin lahaa in buuggan la isku daro akhrisyo kala duwan. Tusaale ahaan, kooras noocan oo kale ah ayaa laga yaabaa inuu qaato laba toddobaad oo tijaabo ah, oo waxaad kuxiran kartaa cutubka 4aad oo leh akhrisyo mawduucyo ah sida kaalinta hore ee daaweynta ee qaabeynta iyo falanqaynta tijaabooyinka; tirooyinka tirakoobka iyo xisaabinta ee ay soo saareen imtixaannada ballaadhan ee A / B ee shirkadaha; naqshadaynta tijaabooyinka si gaar ah diiradda saaraya hababka; iyo arrimaha la taaban karo, sayniska, iyo anshaxa la xidhiidha isticmaalka ka-qaybgalayaasha suuqa suuqyada ee internetka, sida Amazon Mechanical Turk. Waxaa sidoo kale lagu dari karaa akhrinta iyo waxqabadyada la xiriira barnaamijka. Doorashada ku habboon ee udhexeeya fursadaha badan ee suurtogalka ah waxay ku xiran yihiin ardayda ku jirta koorsadaada (sida, shahaadada, macallinka, ama PhD), asalkooda, iyo ujeedooyinkooda.
Koorso siman oo dherer ah ayaa laga yaabaa inay ku jiraan qaybaha mushkiladaha todobaadlaha ah. Cutub kasta wuxuu leeyahay waxqabadyo kala duwan oo lagu calaamadiyay heerka dhibka: fudud ( ), dhexdhexaad ( ), adag ( ), iyo aad u adag ( ). Sidoo kale, waxaan ku dhajiyay dhibaatooyin kasta by xirfadaha uu u baahan yahay: xisaabta ( ), codsiga ( ), iyo ururinta xogta ( ). Ugu dambeyntii, waxan ku calaamadey qaar ka mid ah waxqabadyada aan jecelahay shakhsi ahaaneed ( ). Waxaan rajeynayaa in qaybahaas ururada kala duwan, waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah kuwa ku habboon ardaydaada.
Si loo caawiyo dadka isticmaalaya buuggan koorasyada, waxaan bilaabay qalab waxbarasho oo ay ka mid yihiin manhajyada, xayeysiis, kuxusin ku saabsan cutub kasta, iyo xalalka hawlaha qaarkood. Waxaad ka heli kartaa qalabkaas -waxaadna ka qaybqaadan kartaa-http://www.bitbybitbook.com.